Yintoni izinto ekrwada iinkuni pellet amafutha? Ithini imbonakalo yentengiso
Yintoni impahla eluhlaza ye-pellet fuel? Iyintoni imbonakalo yentengiso? Ndiyakholelwa ukuba yile nto abathengi abaninzi abafuna ukuseta izityalo zepelethi bafuna ukuyazi. Namhlanje, abavelisi boomatshini beepllet zemithi yaseKingoro baya kukuxelela konke. Umatshini okrwada we-injini ye-pellet: Zininzi izinto ezingasetyenziswanga ...
I-Suzhou aquatic plant sludge "eguqula inkunkuma ibe bubutyebi" iyakhawuleza
I-Suzhou yasemanzini yesityalo sludge "eguqula inkunkuma ibe bubutyebi" iyakhawuleza Ngokukhawulezisa kokuhlala kwabantu ezidolophini kunye nokwanda kwabemi, izinga lokukhula kwenkunkuma liyothusa. Ngokukodwa ukulahlwa kwenkunkuma enkulu kuye kwaba "sisifo sentliziyo" kwizixeko ezininzi. ...
Ukufezekiswa kokunye komatshini we-biomass pellet kunye nenkunkuma yeetshipsi kunye ne-straw
Ukuphumelela ngokuhlangeneyo komatshini we-biomass pellet kunye neenkunkuma zeenkuni kunye nenkunkuma Kwiminyaka yakutshanje, ilizwe likhuthaze amandla ahlaziyekayo kunye nokusetyenziswa okuphindaphindiweyo kwamandla ombane ukukhuthaza uqoqosho oluhlaza kunye neeprojekthi zokusingqongileyo. Zininzi izixhobo ezinokusetyenziswa kwakhona ezilalini. Inkunkuma wo ...
Ukutya kwezilwanyana iPellet Mill, IBelt eqhutywa ngeHammer Mill, Isityumzi somthi, I-Garden Wood Chippers, Ukusila Machine For Wood, Ukutya kwezilwanyana iPellet Machine,